Fanalalahana arabe :: Hoesorina afaka 48 ora ireo fiara tsy mihetsika amoron-dalana • AoRaha
Fanalalahana arabe Hoesorina afaka 48 ora ireo fiara tsy mihetsika amoron-dalana
Mitohy ny fanalalahana ny arabe izay ataon’ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA). Hoesorina aorian’ny 48 ora ireo fiara tsy mihetsika intsony mijanona amoron-dalana eny amin’ny Boriborintany fahatelo. Nanome taratasy filazana ho an’ny fokontany sy ireo tompona fiara maty mijanona amin’ny sisina arabe izay hita fa tsy mihetsika amin’ny toerany intsony ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ity boriborintany ity nanomboka ny alakamisy lasa teo.
“Natao izao hetsika izao mba hialan’ireo fiara ireo eo amin’ny toerany, satria miteraka loto tsy voasikotra sy mibahana amin’ny lalana izy ireny. Sarotra ho an’ny mpanadio sy ny mpamafa lalanan’ny kaominina ny manala ny fako tandrify azy nefa tena maloto tokoa ao ambaniny”, hoy ny fanazavan’ny ekipa teknika avy ao amin’ny Boriborintany fahatelo nanatanteraka ny asa.
Voakasik’izany ny lalana eny Ankadifotsy mivoaka eny Ambodivona. Manodidina ny efapolo isa eo ny fiara hita fa tena tsy mihetsika mihitsy amin’iny faritra iny. Handray ny fepetra ho an’ireo tsy manaiky ny fandaminana ny CUA. Nohamafisin’izy ireo fa fanombohana ihany ity hetsika ity fa mbola hitohy ny hetsika any amin’ny faritra hafa,toy ny eny Andravoahangy sy Tsiazotafo ary Antanimena.
Toetrandro Hitohy hateloana ny orana
Fiainana mpanakanto :: Nanaiky hifandoka, hifanoro hevitra, hifankasitraka ireo mpiangaly Rap
Asam-panjakana :: Manokatra birao manokana fandraisana fitarainana mihitsy ny Filoham-pirenena